နှာခေါငျးစညျး ဝတျခွငျးအားဖွငျ့ လူတှရေဲ့ ဆကျဆံပွောဆိုမှုတှမှော ထိခိုကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျသလား။ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
နှာခေါငျးစညျး ဝတျခွငျးအားဖွငျ့ လူတှရေဲ့ ဆကျဆံပွောဆိုမှုတှမှော ထိခိုကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျသလား။
မကျြလုံးနဲ့ ပါးစပျဟာ ခံစားမှုကို အဖျောပွဆုံးနရောတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ သတငျးအခကျြအလကျ အရနိုငျဆုံးနရောတှဖွေဈ
အခုခါ နိုငျငံပေါငျး ၅၀ ကြျောမှာ လူအမြားအကွား နှာခေါငျးစညျး မဝတျမနရေ စညျးမဉျြး ထုတျပွနျထားပွီ ဖွဈပါတယျ။
စညျးမဉျြး မထုတျပွနျထားတဲ့နိုငျငံတှကေ လူအတျောမြားမြားကလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကနေ သူတို့ကိုယျသူတို့ကာကှယျဖို့နဲ့ တခွားသူတှကေို ကာကှယျဖို့ နှာခေါငျးစညျးတှေ ဝတျကွပါတယျ။
နိုငျငံအတျောမြားမြား အထူးသဖွငျ့ အာရှနိုငျငံတှမှော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွီး မဖွဈခငျကတညျးက လထေုညဈညမျးမှုကနေ ဒါမှမဟုတျ အအေးဒဏျကနေ ကာကှယျဖို့ နှာခေါငျးစညျးတှေ ဝတျလေ့ ရှိကွတာပါ။
ဒါပမေဲ့ ဒီလို ဝတျလဝေ့တျထ မရှိခဲ့တဲ့ နိုငျငံတှကေ လူတခြို့ကတော့ သူတို့မကျြနှာမှာ တဈခုခု ဖုံးထားရတာကို အတျောလေး မနတေတျ ဖွဈနကွေပါတယျ။
"နှာခေါငျးစညျး ဝတျထားရတာ အသကျရှူလို့မရဘူး" " စကားပွောရငျ အသံက လုံးထှေးနလေို့ ကောငျးကောငျး ပွောလို့မရဘူး" ဆိုတဲ့ စကားတှေ သူတို့ဆီက ကွားရတတျပါတယျ။
တကယျလို့ နှာခေါငျးစညျးကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဝတျလာကွရငျ နားမကွားတဲ့သူတှနေဲ့ အကွားအာရုံ ပွဿနာရှိတဲ့ တခွားသူတှအေတှကျ အခကျအခဲ တှစေ့ရာ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ပရဟိတအဖှဲ့တှကေလညျး သတိပေးထားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ခေါငျမွီးခွုံပုဝါ နစေ့ဉျဝတျနတေဲ့ ကမ်ဘာတဝနျးက အမြိုးသမီး သနျးပေါငျးမြားစှာအတှကျတော့ စကားပွောဆို ဆကျဆံရာမှာ အခကျအခဲပွဿနာ သိပျမရှိကွပါဘူး။
နီဂကျြဘျ၊ ဒါမှမဟုတျ ဘာရျကာတို့လို ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါမြိုးနဲ့ နှာခေါငျးစညျးက သိသိသာသာ ကှာခွားပါတယျ။ နှာခေါငျးစညျးကို ကနျြးမာရေးအတှကျ ဝတျကွပွီး နီဂကျြဘျ၊ ဒါမှမဟုတျ ဘာရျကာတို့လို ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါကိုတော့ ဘာသာရေး ဒါမှမဟုတျ ရိုးရာထုံးစံအရ ဝတျလရှေိ့တာပါ။
နှာခေါငျးစညျးနဲ့ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါအကွား အမြိုးအစား ကှဲပွားသလို ဝတျဆငျတဲ့ အဓိပ်ပာယျခငျြးလညျး မတူကွပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ နှဈခုစလုံးကတော့ မကျြနှာ အစိတျအပိုငျးကို အကာအကှယျ ပေးပါတယျ။
ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဝတျတဲ့ အမြိုးသမီးတှဆေီကနေ သူတို့ ဘယျလို ကောငျးကောငျး ဆကျသှယျစကားပွောနိုငျကွသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘာသငျခနျးစာ ယူနိုငျပါလဲ။
နှာခေါငျးစညျးတှဟော တခွားသူတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ စကားပွောရာမှာ ထငျထားသလို တကယျပဲ အတားအဆီး ဖွဈစပေါလား။
."ယဘေုယအြားဖွငျ့ လူတှဟော မကျြနှာပျေါက အစိတျအပိုငျး တဈခုခုထကျစာရငျ မကျြနှာတဈခုလုံးကို ပိုအာရုံစိုကျတတျကွတယျ" လို့ လူတှအေခငျြးခငျြး ဆကျသှယျ စကားပွောတဲ့အခါ ဘယျလို မကျြနှာအမူအရာ ဖျောပွလေ့ ရှိသလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျး လလေ့ာနသေူ လနျဒနျမွို့ Royal Holloway တက်ကသိုလျက စိတျပညာရှငျ ရကျဘက်ကာ ဘရူရာ က ပွောပါတယျ။
"မကျြနှာတဈခုလုံးကို မမွငျရတဲ့အခါ တဈခုလုံး ခွုံငုံအာရုံစိုကျတဲ့ ဖွဈစဉျကို ထိခိုကျစပေါတယျ"လို့ သူက ပွောပါတယျ။
ဒါဟာ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဝတျဆငျလေ့ ရှိတဲ့ ဆျောဒီအာရဗေလြူမြိုးတှရေဲ့ ရိုးရာထုံးစံမြိုးမှာတောငျ မှနျနပေါတယျ။
အဲဒီမှာ အမြိုးသားတှေ၊ ကလေးတှကေ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ မဝတျကွတာကွောငျ့ မကျြနှာမမွငျရဘဲ ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ဆကျဆံတတျဖို့က လူတိုငျးအတှကျ မလှယျပါဘူး။ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဝတျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေလညျး အမွဲဝတျထားတာမြိုး မဟုတျဘဲ အိမျထဲမှာ ဒါမှမဟုတျ အမြိုးသမီးတှခေညျြး ရှိတဲ့အခါမြိုးတှမှောဆို ခြှတျထားလေ့ ရှိတာပါ။
မကျြနှာတှကေို လလေ့ာရာမှာ မကျြလုံးနဲ့ ပါးစပျဟာ ခံစားမှုကို အဖျောပွဆုံးနရောတှေ ဖွဈ
ဟိုးကမ်ဘာဦးကာလအစကတညျးက လူသားတှဟော တခွားလူတှရေဲ့ မကျြနှာအမူအရာကို လလေ့ာ အကဲခတျရာမှာ အံ့မခနျးလောကျအောငျ ကြှမျးကငျြကွပါတယျ။ ဒီအရညျအခငျြးက ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲလာတဲ့ ဖွဈစဉျမှာ လူတှအေတှကျ အကြိုးဖွဈစပေါတယျ။
ဒီအကွောငျးကို ခြားလျဈ ဒါဝငျက သူ့ရဲ့ ၁၈၇၂ ခုနှဈထုတျ "လူတှနေဲ့ တိရစ်ဆာနျတှရေဲ့ စိတျခံစားမှု အမူအရာအကွောငျး" "The Expression of the Emotions in Man and Animals" ဆိုတဲ့ စာအုပျထဲမှာ ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
မကျြနှာပျေါက စိတျခံစားမှုကို ဘယျလို အဓိပ်ပာယျဖျောမလဲဆိုတာကို လလေ့ာခွငျးအားဖွငျ့ လူမှုဆကျဆံရေးမှာ အထောကျအကူ ပွုနိုငျသလို နားလညျမှုလှဲတာကိုလညျး လြော့ပါးစပွေီး အုပျစုဖှဲ့လုပျရတဲ့ လုပျငနျးတှကေို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြနဲ့ သဟဇာတ ဖွဈစှာ လုပျနိုငျအောငျ အထောကျအကူ ပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
နှုတျနဲ့ မပွောဆိုတဲ့ ဆကျဆံမှုမှာ မကျြနှာနဲ့ ပါးစပျ အရေးပါပုံ
မကျြနှာတှကေို လလေ့ာရာမှာ မကျြလုံးနဲ့ ပါးစပျဟာ ခံစားမှုကို အဖျောပွဆုံးနရောတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ သတငျးအခကျြအလကျ အရနိုငျဆုံးနရောတှဖွေဈပါတယျ။
ဘာပွောခငျြတာလဲ ဆိုတာကို သိရဖို့အတှကျ မကျြလုံးနဲ့ ပါးစပျ လှုပျရှားမှုကို မသိစိတျကနေ သုံးသပျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
ဒါတောငျမှ ဒီအစိတျအပိုငျး တဈခုခငျြးစီနဲ့တငျ ခံစားခကျြတဈခြို့ကို ဖျောပွနိုငျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပါးစပျနရောက ပြျောရှငျမှုကို ဖျောပွရာမှာ သိပျကောငျးပါတယျ။
ပါးစပျနရောကို ဖုံးအုပျထားတာဟာ ရငျးနှီးဖိတျချေါမှုကို ပွလိုတဲ့အခါမြိုးမှာ ပွဿနာ ပျေါလာနိုငျပါတယျ။
ပါးစပျနရောကို ဖုံးအုပျထားတာဟာ ရငျးနှီးဖိတျချေါမှုကို ပွလိုတဲ့အခါမြိုးမှာ ပွဿနာ ပျေါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး လူနာတှကေို အနီးကပျ ကုသစောငျ့ရှောကျတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး အတျောမြားမြားဟာ လူနာတှေ စိုးရိမျစိတျ လြော့ပါးအောငျ လုပျတဲ့အနနေဲ့ အပွုံးမကျြနှာနဲ့ သူတို့ရဲ့ပုံတှကေို ဆေးရုံ ယူနီဖောငျးဝတျစုံတှပေျေါမှာ ခြိတျထားလေ့ ရှိတာပါ။
ဒါပမေဲ့ မကျြနှာတဈခုလုံးကိုပဲဖွဈဖွဈ တဈစိတျတဈပိုငျးကိုပဲဖွဈဖွဈ အားထားတာဟာ အထငျမှားစရာ ဖွဈစနေိုငျတယျလို့ အိုဟိုငျယိုပွညျနယျတက်ကသိုလျက လြှပျစဈနဲ့ ကှနျပွူတာ အငျဂငျြနီယာ ပါမောက်ခ အဲလကျဈ မာတီနကျဇျက သတိပေးပါတယျ။
ဘယျအခြိနျမှာ အပွုံးက အထငျမှားစရာ ဖွဈစသေလဲ
မာတီနကျဇျဟာ မကျြနှာဖျောပွမှုကို လူတှေ ဘယျလို အဓိပ်ပါယျဖျောသလဲဆိုတာကို ကှနျပြူတာစကျတှကေို သငျပေးဖို့အတှကျ လလေ့ာနတောပါ။
ပွုံးပွဖို့အတှကျ ပြျောနစေရာ မလိုပါဘူး။ ပြျောနတေိုငျးလညျး အမွဲပွုံးမနပေါဘူး လို့ သူက ထောကျပွပါတယျ။
တကယျတနျးမှာ အပွုံးအမြိုးအစား ၁၉ မြိုး ရှိပွီး အဲဒီထဲမှာ ၆ မြိုးကပဲ ပြျောရှငျမှု၊ ကနြေပျအားရမှု ခံစားခကျြတှနေဲ့ ဆကျနှယျနတေယျလို့ လလေ့ာခကျြတှကေ ဆိုပါတယျ။
ကနျြတာတှကေတော့ ထိတျလနျ့တဲ့အခါ၊ ရှကျကွောကျတဲ့အခါ၊ နာကငျြတဲ့အခါနဲ့ တခွားအခြိနျမြိုးတှမှော ပွုံးလေ့ ရှိတာပါ။
မကျြနှာပိုငျး ဖျောပွမှုကို မှနျကနျစှာ အနကျဖျောနိုငျတဲ့ အဓိက သော့ခကျြကတော့ ကိုယျခန်ဓာ အနအေထား၊ ကိုယျခန်ဓာ လှုပျရှားမှုနဲ့ အခွအေနကေို လလေ့ာသုံးသပျဖို့ ဖွဈတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။
တခြို့ အခွအေနတှေမှော မကျြနှာတှဟော နောကျခံ စိတျလှုပျရှားမှုကို ဖျောပွနိုငျစှမျး နညျး
သူဆိုလိုခငျြတဲ့ အခကျြကို သရုပျပွဖို့အတှကျ မစ်စတာ မာတီနကျဇျ က ဖွတျတောကျထားတဲ့ ပုံ နှဈပုံကို ဥပမာ ပွပါတယျ။ ပထမပုံက အမြိုးသမီးငယျတဈဦး မကျြမှောငျကွုတျထားပွီး သူ့မကျြလုံးထဲ ကနေ မကျြရညျတှေ စီးကနြတေဲ့ ပုံပါ။ ဒုတိယပုံကတော့ နဖူးရတှေနျ့၊ မကျြနှာကွီးရဲနတေဲ့ အမြိုးသားတဈဦး ပါးစပျကွီးဟပွီး အျောဟဈတော့မယျ့ ပုံပါ။
အမြိုးသမီးက အရမျး ဝမျးနညျးနပေုံ ရပွီး အမြိုးသားကတော့ တဈယောကျယောကျကို သတျတော့မယျ့ပုံနဲ့ တူတယျလို့ မစ်စတာ မာတီနကျဇျ က ပွောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပုံတှကေို ပုံကွီးခြဲ့ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီပုံတှဟော ဘောလုံး ဂိုးသှငျးသှားလို့ ဝမျးသာအားရ ကနြေပျနတေဲ့ ဘောလုံးပရိသတျ အမြိုးသမီးနဲ့ ဘောလုံးဂိုးသှငျးလိုကျနိုငျလို့ ပြျောရှငျမွူးတူးနတေဲ့ ဘောလုံးသမားရဲ့ ပုံတှေ ဖွဈနတော တှရေ့မှာပါ။
ဒါပမေဲ့လညျး ဒီပုံတှဟော ခံစားခကျြ တရားလှနျ ပွငျးထနျတဲ့ အခွအေနေ မွငျကှငျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးတှမှော မကျြနှာတှဟော နောကျခံ စိတျလှုပျရှားမှုကို ဖျောပွနိုငျစှမျး နညျးပါးတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြစံ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
သာမနျ အခွအေနမြေိုးမှာတော့ မကျြနှာ အမူအရာ ဖျောပွခကျြတှဟော သတငျးစကားနဲ့ ရညျရှယျခကျြကို သိအောငျ လုပျပွတဲ့ လကျဟနျခွဟေနျ၊ ကိုယျအမူအရာ၊ စကားလုံး၊ အသံအတိုးအကယျြ၊ အသံအနအေထား နဲ့ မကျြနှာ အရောငျ အပါအဝငျ သဲလှနျစတှေ စုပေါငျးထားတဲ့ အထဲက တဈခု ဖွဈပါတယျ။
"တခွားသဲလှနျစတှကေို သိရငျ ရပါပွီ၊ နှာခေါငျးစညျး တပျထားတာပဲဖွဈဖွဈ၊ မကျြနှာပဲဖုံးထားထား၊ ပါးစပျက ဖှငျ့မပွောလညျး ကိုယျဘာပွောခငျြတာလဲဆိုတာ တခွားသူတှကေ နားလညျနိုငျပါတယျ"
ဒီအခကျြက မှနျတယျလို့ နယျသာလနျနိုငျငံအခွစေိုကျ စိတျပညာရှငျ ဆမား အယျလျ ဇယာ က ဆျောဒီအာရဗေမြှာ သူနခေဲ့ဖူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှအေရ ပွောပွပါတယျ။
သူကိုယျတိုငျက ခေါငျးမွီးမခွုံပမေဲ့ သူ့အဒျေါ အတျောမြားမြားနဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ ခေါငျးမွီးခွုံကွပါတယျ။
"သိပျမခကျလှပါဘူး။ လုပျနကေတြော့ မဟုတျဘူးပေါ့။ သူတို့နဲ့ မကျြစိကို ပိုအကဲခတျတယျ။ သူတို့ရဲ့ အသံအနအေထားနဲ့လကျဟနျခွဟေနျကို ပိုအာရုံစိုကျ လလေ့ာတယျ" လို့ အယျလျ ဇယာ က ပွနျပွောပွပါတယျ။
မကျြနှာဖုံးထားသူတှမှောတငျ သူတို့ပွောခငျြတာကို တဈဖကျက သိအောငျ လုပျပေးဖို့ တာဝနျရှိတာ မဟုတျပါဘူး။ နားထောငျတဲ့သူဘကျကလညျး လိုတာကို လိုကျညှိလို့ရပါတယျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံ ရာဝါပငျဒီမွို့က အသကျ ၃၄ နှဈအရှယျ ခေါငျးမွီးခွုံ အိမျရှငျမ မာရီယာ အလီ ကလညျး ဒီအခကျြကို သဘောတူပါတယျ။
တခွား ခေါငျးမွီးခွုံအမြိုးသမီးတှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာ တဈခါမှ မတှဖေူ့းတဲ့ သူစိမျး အမြိုးသမီးဆိုရငျတောငျ သူတဈခါမှ အခကျအခဲ မတှခေဲ့ဖူးဘူးလို့ ပွောပွပါတယျ။ လကျဟနျခွဟေနျ၊ အသံနဲ့တငျ သူတို့ ပွောခငျြတာကို နားလညျနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အလီနဲ့ အယျလျ ဇယာ တို့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှအေရ နှာခေါငျးစညျး ဝတျထားသူ ဒါမှမဟုတျ မကျြနှာဖုံးထားသူတှမှောတငျ သူတို့ပွောခငျြတာကို တဈဖကျက သိအောငျ လုပျပေးဖို့ တာဝနျရှိတာ မဟုတျပါဘူး။ နားထောငျတဲ့သူဘကျကလညျး လိုတာကို လိုကျညှိလို့ရပါတယျ။
"ကြှနျမဆိုရငျ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဆောငျးထားရငျ အသံကို မွှငျ့ပွီး ပွောတတျလာတယျ" လို့ ဂြျောဂြီယာပွညျနယျ အကျတလနျတာမွို့နားမှာ နတေဲ့ ကောလိပျကြောငျးသူ မာရီယမျ ဇဖာက ပွောပွပါတယျ။
ဆျောဒီအာရဗေနြိုငျငံ သူဝါလျမွို့မှာနတေဲ့ အသကျ ၂၃နှဈအရှယျ မာဂနျြး အလီကတော့ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဆောငျးထားတဲ့အခါမြိုးမှာ သူ့ရဲ့ မကျြနှာ အမူအရာက တဈမြိုးဖွဈသှားတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒီအခါမြိုးမှာ သူ့မကျြခုံးကို ပငျ့ပွီး ပွောတတျလာတာကို သတိထားမိတယျ လို့ သူက ပွောပွပါတယျ။
နှာခေါငျးစညျး ဒါမှမဟုတျ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဝတျထားရငျတောငျ မကျြနှာရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ မကျြစိကနလေညျး စိတျခံစားခကျြကို သိသိသာသာ ဖျောပွနိုငျပါတယျ။
"မကျြစိဟာ စိတျဝိညာဉျရဲ့ ပွတငျးပေါကျ ဖွဈတယျ"လို့ နာမညျကြျော စာရေးဆရာကွီး ရှိတျစပီးယားကတောငျ ဖှဲ့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
မကျြစိဟာ စိတျဝိညာဉျရဲ့ ပွတငျးပေါကျ ဖွဈတယျ"လို့ နာမညျကြျော စာရေးဆရာကွီး ရှိတျစပီးယားကတောငျ ဖှဲ့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
စိတျပညာရှငျတှကေတော့ လူတှဟော စိတျရဲ့သီအိုရီလို့ ဆိုကွတဲ့ မကျြစိနရောကို ကွညျ့ပွီး ခံစားခကျြ၊ ယုံကွညျမှု၊ လိုအငျဆန်ဒ၊ ရညျရှယျခကျြ စသဖွငျ့ စိတျအခွအေနကေို အကဲခတျ ကောကျခကျြခတြတျကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လူတဈယောကျမှာ အျောတဈဇငျ၊ အကျဈဈပါဂြာ ဆငျဒရုနျး၊ စိတျတကျလှယျကလြှယျရောဂါ ဒါမှမဟုတျ တခွား အာရုံကွောတိုးတကျမှု ခြို့ယှငျးတဲ့ ရောဂါတှေ ရှိမရှိ ဆိုတာ မကျြစိကနပေဲ အကဲခတျလေ့ ရှိကွတာပါ။
အားလုံးသုံးနိုငျတဲ့ နှာခေါငျးစညျး ဖနျတီး
အကွားအာရုံ ခြို့ယှငျးနသေူတှအေတှကျတော့ ပါးစပျဖုံးထားတာဟာ အဓိက အတားအဆီးကွီး ဖွဈနဆေဲပါ။ ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ အနညျးဆုံး ၅ ရာခိုငျနှုနျးဟာ အကွားအာရုံ ခြို့ယှငျးနသေူတှေ ဖွဈပွီး ပါးစပျနဲ့ မကျြနှာ အရိပျအကဲကနေ အဓိပ်ပာယျဖျောမှုဟာ ဆှံ့အနားမကွား သင်ျကတေ သုံးသူတှအေတှကျတောငျ အရေးပါတဲ့ ဆကျသှယျရေး အစိတျအပိုငျး တဈခု ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
အကွားအာရုံ ခြို့ယှငျးသူတှေ နှာခေါငျးစညျးကွောငျ့ ကွုံရတဲ့ ဒီလိုပွဿနာတှကေို ကြျောလှားနိုငျဖို့အတှကျ နိုငျငံတခြို့မှာ ပရဟိတအဖှဲ့တှကေ ပါးစပျကို ဖောကျထှငျး မွငျနိုငျတဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှေ ခြုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
လူထုသယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျးတှေ၊ ဆေးရုံတှေ၊ ဆိုငျကောငျတာတှမှော အလုပျလုပျတဲ့ အကွားအာရုံ ခြို့ယှငျးသူ ဝနျထမျးတှကေို ဒီလို နှာခေါငျးစညျးတှေ ပေးခွငျးအားဖွငျ့ သူတို့ ဖယျကဉျြမခံရအောငျ ကာကှယျနိုငျမယျလို့ ပဟိတအဖှဲ့တှကေ ယူဆနကွေပါတယျ။
နိုငျငံတဈခြို့မှာ ပရဟိတအဖှဲ့တှကေ ပါးစပျကို ဖောကျထှငျး မွငျနိုငျတဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှေ ခြုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ
နှာခေါငျးစညျး ဝတျထားတဲ့အတှကျ တဈခါတလေ ကိုယျစကားပွော ဆကျဆံနသေူနဲ့ ကိုယျ့အကွား ခန်ဓာကိုယျ အတားအဆီးတဈခု ခွားထားသလို ခံစားမိတတျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဆိုငျမှာ တှလေို့ လှမျးစကားပွောတာမြိုးထကျ အလေးအနကျ ဆှေးနှေး ပွောဆိုတဲ့အခါမြိုးမှာ အဲဒီလို ပို ခံစားရတတျတယျလို့ ယော့ချ တက်ကသိုလျက လူမှုဗဒေပညာရှငျ ဟယျရဈဈ အလီက ပွောပါတယျ။
"အဲဒီလိုအခါမြိုးမှာ မစဉျးစားမိဘဲ နှာခေါငျးစညျး ခြှတျပွီး စကားပွောလိုကျမိမလို ဖွဈတတျလေ့ ရှိပါတယျ"
"ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ နှာခေါငျးစညျးမခြှတျသငျ့တဲ့အခါမြိုးမှာ ပိုဆိုးတတျပါတယျ"
သာမနျအခြိနျ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဝတျသူအမြိုးသမီးတှကေတော့ ပိုသကျတောငျ့သကျသာ ရှိတဲ့အတှကျ ဒီလို မဖွဈကွပါဘူး။
နှာခေါငျးစညျး ဝတျတာနဲ့ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါ ဆောငျးတာကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ကှာခွားတာ တှရေ့မယျလို့ မာဂနျြး အလီ က ပွောပါတယျ။
ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါကတော့ နှာခေါငျးပျေါမှာ အဝတျပါးနဲ့ စညျးထားပမေဲ့ မေးစနေဲ့ မေးရိုးနရောမှာ ခပျခြောငျခြောငျ လှားထားလရှေိ့တာပါ။
နှာခေါငျးစညျးတှကေို အဝတျစတှေ၊ polypropylene ပလတျစတဈစလှာတှနေဲ့ အထပျထပျ ခြုပျလေ့ ရှိပွီး နှာခေါငျးနဲ့ ပါးစပျပျေါမှာ အလုံ ပိတျကာထားတာပါ။ ခေါငျးမွီးခွုံပုဝါကတော့ နှာခေါငျးပျေါမှာ အဝတျပါးနဲ့ စညျးထားပမေဲ့ မေးစနေဲ့ မေးရိုးနရောမှာ ခပျခြောငျခြောငျ လှားထားလရှေိ့တာပါ။
နှာခေါငျးစညျးဝတျတာနဲ့ ခေါငျးမွီးခွုံတာက အတေျာ့ကို ကှာတယျလို့ အလီက ပွောပါတယျ။
"နှာခေါငျးစညျး ဝတျထားရငျ မကျြနှာက အရမျးပူအိုကျလာတယျ။ ခေါငျးမွီးခွုံရငျတော့ အဲဒီလို မဖွဈဘူး"
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွီးက ဆကျဖွဈနဆေဲမို့ လတျတလော အခွအေနမှော နှာခေါငျးစညျးတှေ ဖွုတျရမယျ့ပုံ သိပျမတှရေ့သေးပါဘူး။ ဒီတော့ လကျတှကေ့ကြ စဉျးစားပွီး လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈအောငျ လလေ့ာသငျယူကွဖို့ လိုပါတယျ။
အခကျအခဲတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ လုပျသငျ့တဲ့ အခကျြတခြို့ကို စိတျပညာရှငျ အယျလျ ဇယာ အကွံပွုထားတာက "စကားပွောဆို ဆကျဆံမှု အမြားကွီး ပိုလုပျပေးပါ။ ခါတိုငျးထကျ ပိုစကားပွောပါ။ မေးခှနျးတှေ ပိုမေးပါ။ တခွားသူရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို မှနျမှနျကနျကနျ အဓိပ်ပာယျ ကောကျနိုငျအောငျ လုပျပါ"
"ကိုယျ့ရဲ့ တခွားစိတျအာရုံနဲ့ ကိုယျခန်ဓာအမူအယာကို ဘယျလို အသုံးခရြမလဲဆိုတာကို လလေ့ာ သငျယူပါ"
နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေရဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်သလား။
အခုခါ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာ လူအများအကြား နှာခေါင်းစည်း မဝတ်မနေရ စည်းမျဉ်း ထုတ်ပြန်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်းမျဉ်း မထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေက လူအတော်များများကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့နဲ့ တခြားသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဝတ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံအတော်များများ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြီး မဖြစ်ခင်ကတည်းက လေထုညစ်ညမ်းမှုကနေ ဒါမှမဟုတ် အအေးဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဝတ်လေ့ ရှိကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက လူတချို့ကတော့ သူတို့မျက်နှာမှာ တစ်ခုခု ဖုံးထားရတာကို အတော်လေး မနေတတ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။
"နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ထားရတာ အသက်ရှူလို့မရဘူး" " စကားပြောရင် အသံက လုံးထွေးနေလို့ ကောင်းကောင်း ပြောလို့မရဘူး" ဆိုတဲ့ စကားတွေ သူတို့ဆီက ကြားရတတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ နှာခေါင်းစည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝတ်လာကြရင် နားမကြားတဲ့သူတွေနဲ့ အကြားအာရုံ ပြဿနာရှိတဲ့ တခြားသူတွေအတွက် အခက်အခဲ တွေ့စရာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေကလည်း သတိပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခေါင်မြီးခြုံပုဝါ နေ့စဉ်ဝတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီး သန်းပေါင်းများစွာအတွက်တော့ စကားပြောဆို ဆက်ဆံရာမှာ အခက်အခဲပြဿနာ သိပ်မရှိကြပါဘူး။
နီဂျက်ဘ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာရ်ကာတို့လို ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါမျိုးနဲ့ နှာခေါင်းစည်းက သိသိသာသာ ကွာခြားပါတယ်။ နှာခေါင်းစည်းကို ကျန်းမာရေးအတွက် ဝတ်ကြပြီး နီဂျက်ဘ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာရ်ကာတို့လို ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါကိုတော့ ဘာသာရေး ဒါမှမဟုတ် ရိုးရာထုံးစံအရ ဝတ်လေ့ရှိတာပါ။
နှာခေါင်းစည်းနဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါအကြား အမျိုးအစား ကွဲပြားသလို ဝတ်ဆင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ချင်းလည်း မတူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ခုစလုံးကတော့ မျက်နှာ အစိတ်အပိုင်းကို အကာအကွယ် ပေးပါတယ်။
ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဝတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆီကနေ သူတို့ ဘယ်လို ကောင်းကောင်း ဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်ကြသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာသင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပါလဲ။
နှာခေါင်းစည်းတွေဟာ တခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောရာမှာ ထင်ထားသလို တကယ်ပဲ အတားအဆီး ဖြစ်စေပါလား။
."ယေဘုယျအားဖြင့် လူတွေဟာ မျက်နှာပေါ်က အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုထက်စာရင် မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ပိုအာရုံစိုက်တတ်ကြတယ်" လို့ လူတွေအချင်းချင်း ဆက်သွယ် စကားပြောတဲ့အခါ ဘယ်လို မျက်နှာအမူအရာ ဖော်ပြလေ့ ရှိသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း လေ့လာနေသူ လန်ဒန်မြို့ Royal Holloway တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာရှင် ရက်ဘက္ကာ ဘရူရာ က ပြောပါတယ်။
"မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို မမြင်ရတဲ့အခါ တစ်ခုလုံး ခြုံငုံအာရုံစိုက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်"လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာထုံးစံမျိုးမှာတောင် မှန်နေပါတယ်။
အဲဒီမှာ အမျိုးသားတွေ၊ ကလေးတွေက ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ မဝတ်ကြတာကြောင့် မျက်နှာမမြင်ရဘဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဆက်ဆံတတ်ဖို့က လူတိုင်းအတွက် မလွယ်ပါဘူး။ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဝတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း အမြဲဝတ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အိမ်ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးတွေချည်း ရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို ချွတ်ထားလေ့ ရှိတာပါ။
ဟိုးကမ္ဘာဦးကာလအစကတည်းက လူသားတွေဟာ တခြားလူတွေရဲ့ မျက်နှာအမူအရာကို လေ့လာ အကဲခတ်ရာမှာ အံ့မခန်းလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းက ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ လူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ချားလ်စ် ဒါဝင်က သူ့ရဲ့ ၁၈၇၂ ခုနှစ်ထုတ် "လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အမူအရာအကြောင်း" "The Expression of the Emotions in Man and Animals" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်က စိတ်ခံစားမှုကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖော်မလဲဆိုတာကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်သလို နားလည်မှုလွဲတာကိုလည်း လျော့ပါးစေပြီး အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်စွာ လုပ်နိုင်အောင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်နဲ့ မပြောဆိုတဲ့ ဆက်ဆံမှုမှာ မျက်နှာနဲ့ ပါးစပ် အရေးပါပုံ
မျက်နှာတွေကို လေ့လာရာမှာ မျက်လုံးနဲ့ ပါးစပ်ဟာ ခံစားမှုကို အဖော်ပြဆုံးနေရာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းအချက်အလက် အရနိုင်ဆုံးနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပြောချင်တာလဲ ဆိုတာကို သိရဖို့အတွက် မျက်လုံးနဲ့ ပါးစပ် လှုပ်ရှားမှုကို မသိစိတ်ကနေ သုံးသပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဒါတောင်မှ ဒီအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီနဲ့တင် ခံစားချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြနိုင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပါးစပ်နေရာက ပျော်ရွှင်မှုကို ဖော်ပြရာမှာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
ပါးစပ်နေရာကို ဖုံးအုပ်ထားတာဟာ ရင်းနှီးဖိတ်ခေါ်မှုကို ပြလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြဿနာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်နေရာကို ဖုံးအုပ်ထားတာဟာ ရင်းနှီးဖိတ်ခေါ်မှုကို ပြလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြဿနာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူနာတွေကို အနီးကပ် ကုသစောင့်ရှောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အတော်များများဟာ လူနာတွေ စိုးရိမ်စိတ် လျော့ပါးအောင် လုပ်တဲ့အနေနဲ့ အပြုံးမျက်နှာနဲ့ သူတို့ရဲ့ပုံတွေကို ဆေးရုံ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ ချိတ်ထားလေ့ ရှိတာပါ။
ဒါပေမဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားထားတာဟာ အထင်မှားစရာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ အိုဟိုင်ယိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က လျှပ်စစ်နဲ့ ကွန်ပြူတာ အင်ဂျင်နီယာ ပါမောက္ခ အဲလက်စ် မာတီနက်ဇ်က သတိပေးပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ အပြုံးက အထင်မှားစရာ ဖြစ်စေသလဲ
မာတီနက်ဇ်ဟာ မျက်နှာဖော်ပြမှုကို လူတွေ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖော်သလဲဆိုတာကို ကွန်ပျူတာစက်တွေကို သင်ပေးဖို့အတွက် လေ့လာနေတာပါ။
ပြုံးပြဖို့အတွက် ပျော်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ပျော်နေတိုင်းလည်း အမြဲပြုံးမနေပါဘူး လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။
တကယ်တန်းမှာ အပြုံးအမျိုးအစား ၁၉ မျိုး ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ၆ မျိုးကပဲ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျေနပ်အားရမှု ခံစားချက်တွေနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုပါတယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ ထိတ်လန့်တဲ့အခါ၊ ရှက်ကြောက်တဲ့အခါ၊ နာကျင်တဲ့အခါနဲ့ တခြားအချိန်မျိုးတွေမှာ ပြုံးလေ့ ရှိတာပါ။
မျက်နှာပိုင်း ဖော်ပြမှုကို မှန်ကန်စွာ အနက်ဖော်နိုင်တဲ့ အဓိက သော့ချက်ကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ အနေအထား၊ ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
သူဆိုလိုချင်တဲ့ အချက်ကို သရုပ်ပြဖို့အတွက် မစ္စတာ မာတီနက်ဇ် က ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ ပုံ နှစ်ပုံကို ဥပမာ ပြပါတယ်။ ပထမပုံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး မျက်မှောင်ကြုတ်ထားပြီး သူ့မျက်လုံးထဲ ကနေ မျက်ရည်တွေ စီးကျနေတဲ့ ပုံပါ။ ဒုတိယပုံကတော့ နဖူးရေတွန့်၊ မျက်နှာကြီးရဲနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး ပါးစပ်ကြီးဟပြီး အော်ဟစ်တော့မယ့် ပုံပါ။
အမျိုးသမီးက အရမ်း ဝမ်းနည်းနေပုံ ရပြီး အမျိုးသားကတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို သတ်တော့မယ့်ပုံနဲ့ တူတယ်လို့ မစ္စတာ မာတီနက်ဇ် က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံတွေကို ပုံကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီပုံတွေဟာ ဘောလုံး ဂိုးသွင်းသွားလို့ ဝမ်းသာအားရ ကျေနပ်နေတဲ့ ဘောလုံးပရိသတ် အမျိုးသမီးနဲ့ ဘောလုံးဂိုးသွင်းလိုက်နိုင်လို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတဲ့ ဘောလုံးသမားရဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီပုံတွေဟာ ခံစားချက် တရားလွန် ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေ မြင်ကွင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ မျက်နှာတွေဟာ နောက်ခံ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြနိုင်စွမ်း နည်းပါးတဲ့ ခန့်မှန်းချက်စံ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သာမန် အခြေအနေမျိုးမှာတော့ မျက်နှာ အမူအရာ ဖော်ပြချက်တွေဟာ သတင်းစကားနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိအောင် လုပ်ပြတဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်၊ ကိုယ်အမူအရာ၊ စကားလုံး၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ အသံအနေအထား နဲ့ မျက်နှာ အရောင် အပါအဝင် သဲလွန်စတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ အထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
"တခြားသဲလွန်စတွေကို သိရင် ရပါပြီ၊ နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်နှာပဲဖုံးထားထား၊ ပါးစပ်က ဖွင့်မပြောလည်း ကိုယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာ တခြားသူတွေက နားလည်နိုင်ပါတယ်"
ဒီအချက်က မှန်တယ်လို့ နယ်သာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် စိတ်ပညာရှင် ဆမား အယ်လ် ဇယာ က ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ သူနေခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ပြောပြပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်က ခေါင်းမြီးမခြုံပေမဲ့ သူ့အဒေါ် အတော်များများနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ခေါင်းမြီးခြုံကြပါတယ်။
"သိပ်မခက်လှပါဘူး။ လုပ်နေကျတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူတို့နဲ့ မျက်စိကို ပိုအကဲခတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အသံအနေအထားနဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်ကို ပိုအာရုံစိုက် လေ့လာတယ်" လို့ အယ်လ် ဇယာ က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ရာဝါပင်ဒီမြို့က အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ခေါင်းမြီးခြုံ အိမ်ရှင်မ မာရီယာ အလီ ကလည်း ဒီအချက်ကို သဘောတူပါတယ်။
တခြား ခေါင်းမြီးခြုံအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ သူစိမ်း အမျိုးသမီးဆိုရင်တောင် သူတစ်ခါမှ အခက်အခဲ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။ လက်ဟန်ခြေဟန်၊ အသံနဲ့တင် သူတို့ ပြောချင်တာကို နားလည်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလီနဲ့ အယ်လ် ဇယာ တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ထားသူ ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာဖုံးထားသူတွေမှာတင် သူတို့ပြောချင်တာကို တစ်ဖက်က သိအောင် လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားထောင်တဲ့သူဘက်ကလည်း လိုတာကို လိုက်ညှိလို့ရပါတယ်။
"ကျွန်မဆိုရင် ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဆောင်းထားရင် အသံကို မြှင့်ပြီး ပြောတတ်လာတယ်" လို့ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အက်တလန်တာမြို့နားမှာ နေတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူ မာရီယမ် ဇဖာက ပြောပြပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သူဝါလ်မြို့မှာနေတဲ့ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် မာဂျန်း အလီကတော့ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဆောင်းထားတဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့ရဲ့ မျက်နှာ အမူအရာက တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ သူ့မျက်ခုံးကို ပင့်ပြီး ပြောတတ်လာတာကို သတိထားမိတယ် လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်း ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဝတ်ထားရင်တောင် မျက်နှာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မျက်စိကနေလည်း စိတ်ခံစားချက်ကို သိသိသာသာ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
"မျက်စိဟာ စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ ပြတင်းပေါက် ဖြစ်တယ်"လို့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယားကတောင် ဖွဲ့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
မျက်စိဟာ စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ ပြတင်းပေါက် ဖြစ်တယ်"လို့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယားကတောင် ဖွဲ့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ လူတွေဟာ စိတ်ရဲ့သီအိုရီလို့ ဆိုကြတဲ့ မျက်စိနေရာကို ကြည့်ပြီး ခံစားချက်၊ ယုံကြည်မှု၊ လိုအင်ဆန္ဒ၊ ရည်ရွယ်ချက် စသဖြင့် စိတ်အခြေအနေကို အကဲခတ် ကောက်ချက်ချတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မှာ အော်တစ်ဇင်၊ အက်စ်စ်ပါဂျာ ဆင်ဒရုန်း၊ စိတ်တက်လွယ်ကျလွယ်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် တခြား အာရုံကြောတိုးတက်မှု ချို့ယွင်းတဲ့ ရောဂါတွေ ရှိမရှိ ဆိုတာ မျက်စိကနေပဲ အကဲခတ်လေ့ ရှိကြတာပါ။
အားလုံးသုံးနိုင်တဲ့ နှာခေါင်းစည်း ဖန်တီး
အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းနေသူတွေအတွက်တော့ ပါးစပ်ဖုံးထားတာဟာ အဓိက အတားအဆီးကြီး ဖြစ်နေဆဲပါ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ အနည်းဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းနေသူတွေ ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ မျက်နှာ အရိပ်အကဲကနေ အဓိပ္ပာယ်ဖော်မှုဟာ ဆွံ့အနားမကြား သင်္ကေတ သုံးသူတွေအတွက်တောင် အရေးပါတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူတွေ နှာခေါင်းစည်းကြောင့် ကြုံရတဲ့ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတချို့မှာ ပရဟိတအဖွဲ့တွေက ပါးစပ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်နိုင်တဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ချုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ ဆိုင်ကောင်တာတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူ ဝန်ထမ်းတွေကို ဒီလို နှာခေါင်းစည်းတွေ ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့ ဖယ်ကျဉ်မခံရအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ပဟိတအဖွဲ့တွေက ယူဆနေကြပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ချို့မှာ ပရဟိတအဖွဲ့တွေက ပါးစပ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်နိုင်တဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ချုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်
နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ထားတဲ့အတွက် တစ်ခါတလေ ကိုယ်စကားပြော ဆက်ဆံနေသူနဲ့ ကိုယ့်အကြား ခန္ဓာကိုယ် အတားအဆီးတစ်ခု ခြားထားသလို ခံစားမိတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဆိုင်မှာ တွေ့လို့ လှမ်းစကားပြောတာမျိုးထက် အလေးအနက် ဆွေးနွေး ပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ အဲဒီလို ပို ခံစားရတတ်တယ်လို့ ယော့ခ် တက္ကသိုလ်က လူမှုဗေဒပညာရှင် ဟယ်ရစ်စ် အလီက ပြောပါတယ်။
"အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ မစဉ်းစားမိဘဲ နှာခေါင်းစည်း ချွတ်ပြီး စကားပြောလိုက်မိမလို ဖြစ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်"
"ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နှာခေါင်းစည်းမချွတ်သင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်"
သာမန်အချိန် ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဝတ်သူအမျိုးသမီးတွေကတော့ ပိုသက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့အတွက် ဒီလို မဖြစ်ကြပါဘူး။
နှာခေါင်းစည်း ဝတ်တာနဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါ ဆောင်းတာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကွာခြားတာ တွေ့ရမယ်လို့ မာဂျန်း အလီ က ပြောပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်းတွေကို အဝတ်စတွေ၊ polypropylene ပလတ်စတစ်စလွှာတွေနဲ့ အထပ်ထပ် ချုပ်လေ့ ရှိပြီး နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ပေါ်မှာ အလုံ ပိတ်ကာထားတာပါ။ ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါကတော့ နှာခေါင်းပေါ်မှာ အဝတ်ပါးနဲ့ စည်းထားပေမဲ့ မေးစေ့နဲ့ မေးရိုးနေရာမှာ ခပ်ချောင်ချောင် လွှားထားလေ့ရှိတာပါ။
နှာခေါင်းစည်းဝတ်တာနဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံတာက အတော့်ကို ကွာတယ်လို့ အလီက ပြောပါတယ်။
"နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ထားရင် မျက်နှာက အရမ်းပူအိုက်လာတယ်။ ခေါင်းမြီးခြုံရင်တော့ အဲဒီလို မဖြစ်ဘူး"
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြီးက ဆက်ဖြစ်နေဆဲမို့ လတ်တလော အခြေအနေမှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဖြုတ်ရမယ့်ပုံ သိပ်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားပြီး လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် လေ့လာသင်ယူကြဖို့ လိုပါတယ်။
အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ လုပ်သင့်တဲ့ အချက်တချို့ကို စိတ်ပညာရှင် အယ်လ် ဇယာ အကြံပြုထားတာက "စကားပြောဆို ဆက်ဆံမှု အများကြီး ပိုလုပ်ပေးပါ။ ခါတိုင်းထက် ပိုစကားပြောပါ။ မေးခွန်းတွေ ပိုမေးပါ။ တခြားသူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အဓိပ္ပာယ် ကောက်နိုင်အောင် လုပ်ပါ"
"ကိုယ့်ရဲ့ တခြားစိတ်အာရုံနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအမူအယာကို ဘယ်လို အသုံးချရမလဲဆိုတာကို လေ့လာ သင်ယူပါ"